တယုတယပြုစုနေသည် – Grab Love Story
အသားစိုင်ချင်း အားပါပါ ရိုက်သံက တိတ်ဆိတ်သည့် ညထဲ စည်းချက်မှန်မှန် ထွက်ပေါ်နေသည်။ ပြွတ်ပြတ် ပြွတ်ပြတ် နှင့် ငဖယ်ထောင်းချိန် ငရုပ်ဆုံထဲ စေးကပ်နေသည့် ကျည်ပွေ့လို အသံမျိုးကိုလည်း သဲ့သဲ့ ကြားရတတ်သည်။ အသက်ရှူသံ ပြင်းပြင်းနှင့် ကြိတ်၍ ညည်းညူသံတို့ကိုလည်း တိုက်ခန်းကျဉ်းလေးထဲမှ သုံးထပ်သား နံရံပါးပါးတချပ်က မတားဆီးနိူင်။ “အင်း . . အ . . ရှီး . . အား . . ကောင်းလိုက်တာ . . လုပ် လုပ် . . မြန်မြန်လေး . . ” “ပြီးတော့မလား . . .” “ပြီးတော့မယ် . . . အား အ အ . . . ကောင်းလိုက်ထာ . . ” “အင်း . . အင်း . . ” “မောင်လည်း ပြီးတော့မယ် . . .” “အ . .အား . . .ပြီး ပြီ . . ” “အစ် . . အစ် . . အား . . . ” လေသံတိုးတိုး ကြိတ်ညည်းသံနှင့်အတူ အသားစိုင်ချင်း ရိုက်ခတ်သံ ပို၍မြန်ဆန်လာပြီး မကြာမီ ရုတ်တရက် ရပ်တန့်သွားတတ်တာ။ သက်ပြင်းချသံ၊ တီးတိုးစကားပြောသံ၊ မောကြီးပန်းကြီး အသက်ပြင်းပြင်းရှူသံ တို့ကား ယခုရက်ပိုင်း နီနီလှိုင် အဖို့ ညစဉ် ကြားနေကျ အိပ်ရာဝင် တေးသံများအလား။
ခနအကြာ၌ အခန်းတံခါးဖွင့်သံ၊ ရေချိုးခန်းဘက် လျှောက်သွားသံတို့ ကြားရပြီဖြစ်သည်။ ဒီအချိန်မျိုးတွင် နီနီလှိုင်တယောက် အသက်ပင် ပြင်းပြင်း မရှူဝံ့ဘဲ အိပ်ပျော်ဟန်ဆောင်၍ ကုတ်ကုတ်လေး နေတတ်မြဲ။ အရွယ်ရောက်ပြီး ခေတ်ကာလ မိန်းကလေးမို့ ဘာလုပ်နေကြသည်ကို သိသလို ကာမစိတ် ကြွလာတတ်သဖြင့် အလိုလို နားရှက်နေမိသည်။ နီနီလှိုင်က နယ်မြို့တခု၌ တက္ကသိုလ် တက်နေစဉ် နောက်ဆုံးနှစ်မှာ ဖခင်တိမ်းပါးသွား၍ အဝေးသင်ပြောင်းတက်ခဲ့ရသည်။ ယခု ဘွဲ့လေးတခုရပြီး ရန်ကုန်ဆင်းလာကာ မမဝါတို့ဆီမှာ နေရင်း ကွန်ပြူတာ၊ စာရင်းကိုင်၊ စပီကင် စသဖြင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအတွက် ကောင်းနိူးရာရာ သင်တန်းများ လာတက်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ဝါဝါလှိုင် တစ်ယောက်ကတော့ စောစီးပင် သင်္ဘောအရာရှိတယောက်နှင့် အိမ်ထောင်ကျ၍ ရန်ကုန်မှာ အခြေကျနေပြီ။ အစောပိုင်းက ယောက္ခမအိမ်မှာ အတူနေသော်လည်း သိပ်အဆင်မပြေလှသဖြင့် ယခုတိုက်ခန်းလေးသို့ပြောင်းရွှေ့ကာ အိမ်ခွဲနေကြသည်။
သားလေးတယောက်ရသည်ပင်မကြာလှသေး။ မိခင်မုဆိုးမကြီးလည်း သားအငယ်တယောက်နှင့် …. မြို့လေးမှာပင် ကျန်ခဲ့ရင်း မိခင်လည်း တာဝန်ပေါ့စေရန်၊ ဝါဝါလှိုင်လည်း အဖော်ရစေရန် ယခုလို နီနီလှိုင် လာနေခြင်းသည် ဖြစ်သည်။ သင်္ဘောအရာရှိ ကိုဆွေတင်ကလည်း သူ့မိန်းမအတွက် အဖော်ရ၍ စိတ်အေးရသလို မိန်းမ၏ ညီမအရင်းကြီးမို့လည်း ကူညီပေးရန် ဝန်မလေးလှချေ။ သင်တန်းစရိတ်၊ စားစရိတ်၊ အသုံးစရိတ် အစစ အကုန်အကျခံရန် သဘောတူ ခွင့်ပြုပြီးသား ဖြစ်သည်။ နီနီလှိုင် ရောက်ခါစကတော့ ကိုဆွေတင်က သင်္ဘောပေါ်မှာ။ ဝါဝါလှိုင်လည်း သားဦးလေးတယောက်နှင့် လုံးလည်ချာလည်လိုက်နေစဉ် ညီအမ နှစ်ယောက် တိုင်ပင်ဖော် တိုင်ပင်ဖက်၊ ကလေးကူထိန်းရင်း အစစ အဆင်ပြေလှသည်။ ယခုလည်း အဆင်မပြေသည်တော့ မဟုတ်။သင်္ဘောမှ ပြန်ရောက်စ ကိုဆွေတင်တို့ လင်မယား ချစ်ရည်လူးကြသည့်အသံများကြားရတိုင်း နီနီ တယောက် ကာမဆန္ဒတွေက ကြွကြွလာတတ်သည်မို့ အနေရခက်လှသည့် တချက်သာ ပြောစရာ ရှိသည်။
တချိန်က ရည်းစားနှင့်တော့ နမ်းဖူးရုံ၊ နိူ့ပေးကိုင်ရုံထက် မပိုခဲ့ဖူးချေ။ လိင်ဆက်ဆံမှု အတွေ့အကြုံမရှိသေးသည့် အပျိုစင် တယောက်။ တကိုယ်ရည် အာသာဖြေသည်ဆိုတာလည်း ကြားသာကြားဖူးသည်။ အတွေ့အကြုံမရှိ။ မမဝါတို့ လိင်ဆက်ဆံသည့် အသံကြားတိုင်း ဖက်လုံးကို တင်းတင်းဖက် ပေါင်ခွကြားထားကာဆီးခုံနှင့် ပွတ်ကာပွတ်ကာ ကြိတ်အာသာဖြေနေရသည်။ ကောင်းသလိုလို၊ မကောင်းသလိုလို ဘာမှန်း ညာမှန်း မသိ၊ အနေရ ခက်သည်တော့ တဒင်္ဂ လျော့ပါးသွားသလိုလို။ တခုခု လိုနေသေးသလိုလို၊ ဟာတာတာခံစားရသည်။ အပြစ်ရှိသလို၊ ရှက်သလိုလိုလည်း ဖြစ်ရသဖြင့် စိတ်အာရုံလွှဲကာ ကြိုးစားမေ့ဖျောက်ရသည်။ ကိုဆွေတင် အဖို့မှာတော့ ယခင်လို အားရပါးရ ဝုန်းဒိုင်းကျဲ ချစ်ရည်မလူးရသည်လေးကသာ အနည်းငယ် ကသိကအောင့် ဖြစ်ရသည်။ သင်္ဘောပေါ်မှာ ငတ်ပြတ်ခဲ့လေသမျှ အတိုးချ အပီလိုးလိုသော်လည်း ထိန်း၍ အသံမထွက်အောင် ကြိတ်လိုးနေရသည်ကို အားမရလှပေ။
အထူးသဖြင့် ကာမ အထွတ်အထိပ်ရောက်ခါနီးနှင့် ရောက်ချိန်များတွင် စိတ်ရှိလက်ရှိ မဝုန်းရဘဲ ကြိတ်လိုးရသည်မို့ ဒင်းပြည့်ကြပ်ပြည့် ပွင့်ထွက်ပေါက်ကွဲသည့် အရသာ မခံစားရ၍ အနည်းငယ်တော့ အောင့်သက်သက် ရှိသည်။ ဝါဝါလှိုင်၏ ပွင့်ထွက်အော်ညည်းသံမျိုးကို ကြိုက်နှစ်သက်လှသော်လည်း တိတ်တိတ် ကြိတ်ညည်းသံလေးများနှင့်သာ ကျေနပ်နေရသည်။ ခယ်မက နေ့ဘက်များ၌ သင်တန်းကိစ္စများနှင့် အိမ်မှာမရှိသော်ငြား ကိုဆွေတင်ကိုယ်တိုင်က သင်္ဘော ပြန်ရောက်စမို့ အပြင်သွားနေရသဖြင့် နေ့လည်နေ့ခင်းတွေမှာလည်း မအားတတ်သေး။ ခယ်မ မရှိချိန်တော့ စိတ်လွှတ်ကိုယ်လွှတ်အားပါးတရ လိုးဆော်ရန် အားခဲထားသည်။ဒီနေ့တော့ ကိုဆွေတင် အပြင်သွားစရာမရှိ။ ခယ်မချောကလည်းသင်တန်းအတွက် အပြင်သွားလေပြီ။ နေ့လည်စာစားပြီး ကလေးချော့သိပ်ကာ အားရပါးရ တချီဆွဲရန် စိတ်ကူးထားလေသည်။ “ဝါ ရေ . . . လာ . . လူလစ်တုန်းလေး တချီလောက် အားရပါးရ ဆွဲရအောင် . . .”။
ဟိ . . မောင်က ဒီအချိန် ချောင်းနေတာ မဟုတ်လား . . ဝါဝါကလည်း သူ့ယောက်ျား အကြိုက်သိသူပီပီ အသင့်ပြင်လိုက်သည်။ ပြန်ရောက်ကတည်းက ကြိတ်လိုးသာ လိုးနေရရှာသည့်အတွက်လည်း ယောက်ျားကို အားနာမိသည်။ နှစ်ဦးသား သွက်သွက်ပင် အဝတ်အစားများ ချွတ်ချကာ ကုတင်ပေါ် နေရာယူလိုက်ကြသည်။ နီနီတယောက် ဒီနေ့တော့ သင်တန်းသွားရတာ သွားမောကြီးဖြစ်သွားသည်။ ရုတ်တရက် သင်တန်းခန်း နေရာရွှေ့ရသဖြင့် ကောက်ခါငင်ခါ ပိတ်ရက် သတ်မှတ်လိုက်သည်။ အခြားသွားစရာနေရာလည်း မရှိသဖြင့် ဖတ်စရာ မှတ်စရာရှိတာသာ လုပ်တော့မည်ဟု အိမ်သို့သာ တန်းပြန်လာခဲ့သည်။ နေ့ခင်း မမဝါ နှင့် ကလေး အိပ်ပျော်နေပါက အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန် တိုက်ခန်း တံခါးကို တိတ်တိတ်လေး ဖွင့်ကာ ခြေသံဖော့ ဝင်နေကျ အတိုင်း ဝင်ခဲ့သည်။ တူလေးက အိမ်ရှေ့ ပုခက်ထဲတွင် နိူ့ဗူးလေး ကိုင်ကာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်မောကျလျက်။ အပြစ်ကင်းစင်သည့် ချစ်စရာ ကလေးငယ်လေးကို ကြည်နူးစွာ ငေးစိုက်ကြည့်နေမိသည်။ “အား . . . ရှီး ရှီး . . အား . . . မောင်ရယ် . . ကောင်းလိုက်ထှာ . . အူး . . အဟူး . . ” အို . . မမဝါ အသံပဲ။
ခါတိုင်းလို တိုးတိုးသက်သာ ကြိတ်ညည်းတာမျိုးမဟုတ်။ အားရပါးရ အော်မြည်ကာ မိမိမရှိတုန်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် လိင်ဆက်ဆံနေကြပြီကိုး။ နီနီ ဘာဆက်လုပ်ရမှန်း မသိ။ အသာလေး ပြန်ထွက်သွားရမည်မှန်း သိပေမင့် မကြားစဖူးကြားရသည့် ကာမတွန်သံကြောင့် ခြေလှမ်းများကတော့ အသံလာရာဆီ ဦးတည်နေမိပြီ။ အိပ်ခန်းတံခါးက ဟလျက်။ အတွင်းကို အသာချောင်းကြည့်လိုက်သည်။ တံခါးဝင်ပေါက်က ကုတင်ခြေရင်းဘက်မှာမို့ မြင်ကွင်းက အရှင်းသား။ ဝါဝါလှိုင် တယောက် ဒူးထောင် ပေါင်ကားကာ ပက်လက်။ ကိုဆွေတင်ခေါင်းက ပေါင်ကြားမှာ တလှုပ်လှုပ်နှင့်။ ဝါဝါ့ ညာဘက်လက်က ကိုဆွေတင်ဦးခေါင်းကြီး ခွာထွက်သွားမှာ စိုးသည့်အလား ဆံပင်များကြား ဆုပ်ကိုင်လျက် ဆွဲထားသည်။ ကိုဆွေတင် လျှာကား ဝါဝါ ဆောက်ဖုတ်တပြင်လုံးကို နေရာ အနှံ့ ယက်လိုက်၊ ကလိလိုက် လုပ်နေလေသည်။ ဖောင်းမို့မို့ ဘေးသားများကို ကျုံးယက်သည် ဆွဲစုပ်သည်။
အစေ့လေးကို မထိတထိ ကလိသည် ငုံပေးသည် ယက်ပေးသည်။ တချက်တချက် ချိုချဉ် စုပ်သလို စုပ်သည်။ ပြီး ဆောက်ဖုတ်အဝထဲ လျှာကို ချွန်၍ ထိုးထိုးထည့်သည်။ လျှံထွက် စီးကျလာသော ဆောက်ရည်များကို အကွဲကြောင်းတလျှောက် စအိုဝနားမှ စ၍ ဆောက်စေ့ထိပ်ထိ လျှာအပြားလိုက် သိမ်းကြုံး ယက်ကာ မြိုချသည်။ ဝါဝါ တင်ပါးများက မွေ့ယာမှ တထွာခန့် မြောက်တက်နေပြီ။ ပင့်ပင့်ပေးနေသည်။ ဘေးတိုက်လည်း ဝေ့ဝှိုက်ပေးသည်။ “အာ. အိ . . အိ . . ရှီး ရှီး . . . ” ဘာဂျာမှုတ်သည်ဆိုတာ ဒီလိုကိုး။ အနောက်တိုင်း အပြာကား အချို့ထဲ မြင်ဖူးပေမယ့် မြန်မာလင်မယားတွေ ဒီလို လုပ်မည်မှန်း မထင်ခဲ့။ ယခု မမဝါကိုယ်တိုင်ပင် အလွန် နှစ်ခြိုက်စွာ အမှုတ်ခံနေသည်ကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့နေရပြီ။ နီနီတယောက် မမြင်စဖူး ထူးဆန်းလှသည့် ဒီမြင်ကွင်းထဲ နစ်မြောကာ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အဆက်ပြတ်သွားသည်။ ခါတိုင်း ညဘက် ကြိတ်ညည်းသံများသာ ကြားဖူးရာ။
လင်မယား လိင်ဆက်ဆံသည်ဆိုသည်မှာ မိန်းမအပေါ် ယောင်္ကျားက ထပ်လျက် မိန်းမအင်္ဂါထဲ ယောက်ျားလိင်တံ အဝင်အထွက်ဟုသာ နားလည်ထားသည်။ ယခုလို အသေးစိတ် မြင်ရတော့ အလွန်စိတ်ဝင်စားမိသည်။ သင့်သည် မသင့်သည် မသိတော့။ ပြန်လှည့်ထွက်သွားရန် မဆိုထားနှင့်၊ ဆေးမိနေသူတယောက်လို ငေးနေမိသည်။ မမဝါ၏ ဆောက်ဖုတ်ကား ပြောင်ရှင်းကာ အမွှေးအမျှင်မရှိ။ အိမ်ထောင်မကျမီ အထိ ညီအမ နှစ်ယောက် အတူနေ၊ အတူ ကြီးပြင်းလာသည်မို့ မမဝါ အမွှေးသန်မှန်း သိထားသည်ပဲ။ ယခုမူကား သေချာရိတ်သင်ထားပုံရသည်။ မမြင်စဖူးမို့ မိန်းမချင်းပင် မိမိအမ၏ ဆောက်ဖုတ်ကတုံးပြောင်ရှင်းနေသည့် အလှကို တအံ့တဩ ဖြစ်မိသည်။ လျှာစွမ်းအောက်မှ ပင့်ပင့်ပေးနေသည့် ဆောက်ဖုတ်ကား အရောင်တလက်လက်နှင့် ဖောင်းမို့ရွှဲစိုနေသည်။ ကလေးတယောက်မွေးထားသည်ဟုပင် မယုံနိူင်စရာ၊ ဆောက်ဖုတ်က ပြဲအာမနေ။
ဘေးသားခြမ်းကြီးနှစ်ခုက အပေါက်ဝ တဖက်စီမှာ စေ့ကပ် ဖောင်းမို့နေသည်မို့ အဝ ဟတတလေး ပေါ်သည်ဆိုရုံသာ။ နီညိုရောင် ပွင့်ဖတ်လေးနှစ်ချပ်က ဆီးကာထားသည်။ ထိုအဖတ်လေးများကို ကိုဆွေတင်တယောက် စုပ်လိုက် ယက်လိုက် ဘေးတိုက် ခတ်လိုက် လုပ်နေသည်ကိုလည်း မြင်ရသည်။ အမွေးအမျှင် ကင်းရှင်းနေမှ ဆောက်စေ့ဆိုသည့် အဖုလေးကို အထင်းသား မြင်ရသည်။ ကိုဆွေတင်က တချက်တချက် ဖုံးနေသည့် အရေပြားလေးကို တွန်းတင်ရင်း ဆောက်စေ့ ငုတ်တုတ်လေးကို ငုံ၍ စုပ်ပေးသေးသည်။ “အာ အာားး ရှီး ရှီး ကောင်းလိုက်ထှာ . . အာားားး . . ” တင်ပါးအစုံကို ပင့်မြောက်ကာ ဟိုဘက် ဒီဘက် ရမ်းခါရင်း အော်ဟစ် ညည်းညူနေလေသည်။ ရိုးရိုးကုတ်ကုတ် အနေအေးသည့် မမဝါတယောက် ကုတင်ပေါ်ကျ ခုလို အပြောအဆိုရော၊ အမှုတ်အခံပါ ပွင့်လင်း ပက်စက်လိမ့်မည်ဟု မထင်ခဲ့။ ဝမ်းလျားမှောက်ကာ ဆောက်ဖုတ်ယက်နေသည့် ကိုဆွေတင်ဒုတ်ကား။
အချောင်းလိုက်နောက်ပစ်ထားသဖြင့် ဂွေးဥနှင့်ဖိကာ မာတင်းလျက် ပေါင်နှစ်လုံးကြားမှ ကွမ်းသီးခေါင်းက ပြူထွက်နေသည်။ ခနအကြာမှာတော့ မမဝါ တင်ပါးအစုံ ဝုန်းကနဲ မွေ့ယာပေါ် ပြုတ်ကျသည်။ “အား . . . တော်ပြီ . . ရပြီ . . ကောင်းလိုက်တာ . . မောင်ရယ် . . ရှီး ရှီး . . လူကို ဟိုက်သွားတာပဲ . . .” “အားရပါးရ အော်ရတာကြောင့် လည်း ပိုကောင်းနေတာ မဟုတ်လား . . . ” “ဟုတ်တယ် . . မောင်ရယ် . . ဒီနေ့တော့ စိတ်ရှိလက်ရှိ အော်ပစ်လိုက်ရတာ တအား ကောင်းတာပဲ . . .” နီနီစိတ်ထဲ မလုံမလဲနှင့် အားတုံ့အားနာ ခံစားရသည်။ မိမိကြောင့် သူများလင်မယား အနှောင့်အယှက် ဖြစ်နေပြီပဲ။ ကိုဆွေတင် ကုတင်ပေါ်မှ ဆင်း၍ လီးကြီး တရမ်းရမ်းနှင့် ခေါင်ရင်းဘက်တိုး မတ်တပ်ရပ်လျက် ဝါဝါ မျက်နှာဘက် တိုးကပ်သွားသည်။ ယောက်ျားအင်္ဂါကြီး မာတင်းနေတာမျိုး တသက်မှာ တခါမှ အနီးကပ် မမြင်စဖူးမို့ ထူးဆန်း အံ့ဩနေမိသည်။ လီးတံ ထိပ်ဖူးကြီးကလည်း မှိုပွင့်ကြီးပမာ လုံးလုံးချွန်ချွန်နှင့် စွင့်ကားနေသည်။
ထိပ်ဖျားအဝလေးတွင် ပျစ်ချွဲချွဲအရည်က ညောင်စီးကျသလို တွဲရရွဲခိုနေသည်။ မမဝါ ဆောက်ဖုတ်သေးသေးလေးနှင့် ဆန့်ပါ့မလား ဟုပင် ထင်မိသည်။ ဒါကြီးနဲ့ လုပ်ကြမှာပါလား ဟု အတွေးပေါ်ကာ ဆက်လက်ကြည့်မြင်လိုစိတ်တို့က တားမနိူင် ဆီးမရ။ ဝါဝါလှိုင်က ဘေးတစောင်းလှည့်ကာ အနားရောက်လာသည့် လီးကြီးကို ပါးစပ်ဟကာ စောင့်ကြိုလိုက်သည်။ လီးတံကို အရင်းမှ ဆုပ်၍ ဒစ်ကြီးကို ငုံလိုက်သည်။ ပြီး ပါးစပ်ထဲ ဝင်နိူင်သမျှ ဝင်အောင် ဆက်ငုံသည်။ ကိုဆွေတင် တွန့်ကနဲ ဖြစ်ကာ ခေါင်းမော့သွားသည်။ ဖြတ်ကနဲ မျက်လုံးထောင့်စွန်းမှာ အခန်းဝမှ လူရိပ်ကို မြင်လိုက်သည်။ ခယ်မ နီနီလှိုင် မှန်း သိလိုက်ပေမင့် မသိဟန် မမြင်ဟန်ဆက်ဆောင်ကာ မျက်စိမှိတ်၍ ခေါင်းမော့ကာ ဖီးလ်တက်ပြနေလိုက်သည်။ တိုင်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပင်။ ခယ်မ မရှိချိန် အားပါးတရ လိုးသည့်အချိန်မှာမှ ခယ်မက ချောင်းကြည့်နေသည်မို့ ကိုဆွေတင် အကြိုက်တွေ့သွားသည်။
မိမိတို့ လိင်ဆက်ဆံတာကို တခြားလူကို ပြလိုသည့် ငုတ်လျှိုးနေသည့် ဆန္ဒမျိုး ကိုဆွေတင်မှာရှိသည်။ ယခုလိုဆိုတော့ ချောင်းကြည့်နေသူ ညီမရှေ့ အမဖြစ်သူကို ပီပီပြင်ပြင် လိုးပြရတော့မည်မို့ အလွန်ပင် ဝမ်းမြောက်မိလေပြီ။ လီးကြီးပင်လျှင် ခါတိုင်းထက် မာတင်းကာ တဆတ်ဆတ် တုန်နေပြီ။ကိုဆွေတင်သည် သူတို့လင်မယား လိင်ဆက်ဆံကြပုံများကိုလည်း ဗွီဒီယိုရိုက်၍ ကွန်ပြူတာထဲ သိမ်းထားကာ သင်္ဘောတက်လျှင်လည်း ယူသွားလေ့ရှိသည်။ ဝါဝါလှိုင်ကလည်း ကိုဆွေတင် ပင်လယ်ကြီးထဲ အထီးကျန်ကာ ဆောက်ဖုတ်ငတ်ပြတ်နေချိန်၊ ထုချင်သလို ထု နိူင်ရန်အတွက် လိုလိုလားလားပင် အရိုက်ခံသည်။ ပိုပိုသာသာပင် သရုပ်ဆောင်ပေးသည်။ ဗွီဒီယို ရိုက်နေမှန်းသိ၍ ပို၍လည်း ဖီးလ်တက်သည်။ ကိုဆွေတင်အဖို့မှာတော့ ဆိပ်ကမ်းကပ်၍ အင်တာနက်ရချိန်များတွင် ဗွီဒီယိုဆက်စ်ချက်ကာ ချစ်ဇနီးဆောက်ဖုတ်ပွတ်တာကြည့်ရင်း သူလည်း ထု၍ရသော်လည်း။
ပင်လယ်ပြင်ကြီးထဲ ငတ်ပြတ်နေချိန်မျိုး၌ ကိုယ်တိုင်သရုပ်ဆောင် ရိုက်ကူးထားသည့် ဗွီဒီယိုသာကြည့်၍ ထုရလေသည်။ ဝါဝါဆောက်ဖုတ် လှလှလေးကို မိမိကိုယ်တိုင် လိုးနေပုံကို ကြည့်ထုရသည့်အရသာနှင့် အခြား နှာကားများကြည့်ရသည့်အရသာ မလဲနိူင်။ ဝါဝါ့ဆောက်ဖုတ်အလှ၊ မိမိတို့ပြိုင်တူ နတ်ပြည်အရောက် လှမ်းတက်ပုံ၊ မိမိ၏ လိုးအားကောင်းပုံ၊ ဝါဝါတယောက် စိတ်ပါလက်ပါ ကာမစည်းစိမ်ခံတတ်ပုံ တို့ကို အခြားလူတယောက်ကို ကြွားဝါ ပြသလိုစိတ်မျိုးကလည်း ရှိသည်။ ကံကြုံသည် ဆိုရမည်လား။ နဂိုက ပြချင်ချင် ကိုဆွေတင်တယောက် သင်္ဘောပေါ်တွင် ထွန်းမင်းနှင့် သောက်ရင်း၊ စားရင်း၊ ဆွေးနွေးကြ ရင်းနှင့် ပြဖြစ်သွားသည်။ ထိုသို့ ပြဖြစ်သည့်အခါမျိုးမှာ ထူးဆန်းသည့် သာယာမှု၊ ကျေနပ်မှု ရှိမှန်း သူ့ဘာသာ သိလာသည်။ ကိုဆွေတင်နှင့် ထွန်းမင်းက ထိုသင်္ဘောမတိုင်မီကတည်းက အခြားသင်္ဘောတစီးတွင် အတူစီးဖူးသည်။
တိတိကျကျ ပြောရလျှင် ကိုဆွေတင်က ထွန်းမင်းအသက်ကိုပင် သက်စွန့်ဆံဖျား ကယ်တင်ခဲ့ဖူး၍ ထွန်းမင်း၏ အသက်သခင်ဟု ဆိုနိူင်သည်။ သင်္ဘောပေါ်တွင် လူမျိုးခြားတွေကြား ဒုတိယ အရာရှိ ကိုဆွေတင် နှင့် အင်ဂျင်နီယာပေါက်စ ထွန်းမင်းတို့ နှစ်ဦးသာ မြန်မာပါရှိသည်။ စကားပြောဖော်၊ ရင်ဖွင့်ဖော်၊ အတူတူ သောက်ဖော်၊ အတူတူ အပြင်ထွက်ဖော် မို့ တယောက်အကြောင်း တယောက် အတွင်းသိ ခင်မင်ကြသည်။ သင်္ဘောစီးသည်ပင် သိပ်မကြာသေး၊ ကံဆိုးလှသည့် တရက်တွင်တော့ ပင်လယ်ပြင်ထဲ သင်္ဘောမီးလောင်ကာ မထိန်းနိူင်တော့ပဲ သင်္ဘောတစီးလုံးကို မီးက ဝါးမြိုစပြုသဖြင့် အမြန် စွန့်ခွာကြရသည်။ ထွန်းမင်းက သူ့ဂျူတီချိန်မို့ အင်ဂျင်ခန်းအတွင်း ရှိနေစဉ် ဖြစ်သည်။ သင်္ဘောစွန့်ခွာဖို့ လူစုကြတော့ ထွန်းမင်းကို မတွေ့။ အခြားလူများအားလုံး သွေးရူးသွေးတန်းနှင့် အသက်ကယ်လှေထဲ ရောက်ကုန်ကြပြီ။ ကျန်ရစ်သူကို ဂရုမစိုက်တော့ပဲ သူတို့အသက်ဘေးလွှတ်ဖို့သာ ကြိုးစားနေကြသည်။
ကိုဆွေတင် ဘယ်လိုတားတား၊ ဘယ်လိုပြောပြော မရ။ အသက်ကယ်လှေ ချ၍ ပြေးကြရန်သာ လုပ်နေကြပြီ။ ကိုဆွေတင် အမြန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ မိမိညီငယ်ကဲ့သို့ ခင်မင်ရသည့် မြန်မာအချင်းချင်း မထားခဲ့နိူင်။ သူများနှင့် လိုက်မသွားပဲ ချန်နေခဲ့သည်။ အသက်ကယ်လှေ မရှိတော့ပေမင့် ရာဘာဖောင်များရှိနေသေးသည်။ အင်ဂျင်ခန်းထဲသို့ အသက်ရှူ ကိရိယာနှင့် ပြေးဆင်းကာ ထွန်းမင်းကို ရှာသည်။ တွေ့ပြီ။ ထွန်းမင်း လည်း အမြန်ပြေးထွက်ရန် ကြိုးစားခဲ့ပုံပင်။ အင်ဂျင်ခန်းထွက်ပေါက် လှေခါးရင်းနားမှာ ပုံလျက်သားလဲနေသည်။ ထွန်းမင်း ဂျိုင်းအောက် လက်လျှိုသိုင်းဖက်ကာ လှေခါးတလျှောက် ဒရွတ်ဆွဲခဲ့သည်။ အပေါ်ရောက်သည်နှင့် အဝတ်အစားများ လျှော့ပေးလိုက်သည်။ ပြင်ပလေရှူ လိုက်ရတော့ ထွန်းမင်း မျက်လုံးပွင့်လာသည်။ တော်သေးသည်။ မီးခိုးများရှူ ရှိုက်မိပြီး သတိမေ့လဲကျနေတာ သိပ်မကြာသေး၍ ဖြစ်မည်။ မူးဝေဝေနှင့် ကြောင်တောင်တောင်တော့ ဖြစ်နေဆဲ။
ထိခိုက်ဒါဏ်ရာ ရှိမရှိ ထွန်းမင်းတကိုယ်လုံး ကိုဆွေတင် အမြန်ကြည့်လိုက်သည်။ ခြေသလုံးနှင့် ဖနောင့်နား ပွန်းပဲ့သည်မှ အပ အခြားဒဏ်ရာ ကြီးကြီးမားမား မရှိ။ အသက်ကယ်အကျီလည်း ရှာချိန်မရှိတော့။ မိမိ အသက်ကယ် အကျီကို ဝတ်ပေးလိုက်သည်။ ပြီးသည်နှင့် အနီးရှိ အသက်ကယ်ဖောင်ကို ရေထဲ ပစ်ချလိုက်သည်။ ထွန်းမင်းကို ပွေ့ချီ၍ ရေထဲ ပစ်ချကာ သူ့နောက်မှ လိုက်၍ ကိုဆွေတင်လည်း ခုန်ချလိုက်သည်။ အသက်ကယ်အကျီကြောင့် ပေါလောပေါ်နေသည့် ထွန်းမင်းဆီ ကူးခတ်သွားပြီး ရာဘာဖောင် ဆီသို့ ဆွဲယူခဲ့သည်။ ကိုဆွေတင်က အရင်တက်ပြီးမှ ထွန်းမင်းကို ဆွဲတင်ရသည်။ ထိုစဉ်မှာပင် စောစောက အရင် စွန့်ခွာသွားသည့် အသက်ကယ်လှေက အနားရောက်လာကာ ရာဘာဖောင်ကို ဆွဲယူ၍ မီးလောင်နေသော သင်္ဘောမှ ဝေးရာသို့ မောင်းပြေးခဲ့ကြသည်။ သင်္ဘောကြီးကား တစီးလုံးမီးလောင်ကာ ပေါလောပေါ်လျက်။ မြုတ်တော့မသွား။ မိမိတို့၏ ပစ္စည်းများလည်း အကုန်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည်။
ကယ်ဆယ်ရေးရောက်လာပြီး ဆေးရုံပို့၊ ထိုမှ တဆင့် သက်ဆိုင်ရာ နိူင်ငံ အသီးသီး ပြန်ပို့ခဲ့ကြသည်။ ထွန်းမင်းတယောက် ဆေးရုံပေါ်မှာ အကြောင်းစုံသိပြီးနောက် ကိုဆွေတင်ကို ဖက်ကာ အားရပါးရ ငိုကြွေးလေသည်။ ငုတ်တုတ်ထိုင်ကာ လက်အုပ်ချီကန်တော့လေသည်။ ကျေးဇူးတင်လှကြောင်း တတွတ်တွတ် ပြောလေသည်။ “ကျွန်တော့်မှာ အမေမွေးတဲ့ အသက်မရှိတော့ဘူး အကို . . . အကိုပေးတဲ့ အသက်ပဲ ရှိတော့တယ် . . . အကို့ အသက်နဲ့ ရင်းပြီး ကျွန်တော့်ကို ကယ်ခဲ့တဲ့ အကို့ကို ဘယ်လို ကျေးဇူး ဆပ်ဆပ် မကုန်နိူင်တော့ပါဘူး အကိုရယ် . . . . . .” ထိုသို့ အသက်ဘေးမှ သီသီလေး လွှတ်ခဲ့သည့် ဒီ ကြမ္မာဆိုးကြီးကြောင့်လည်း ကိုဆွေတင်နှင့် ထွန်းမင်းတို့ ရင်းနှီးမှု သံယောဇဉ် ပိုခဲ့ကြသည်။ ထွန်းမင်းကလည်း ကိုဆွေတင်ကို အသက်သခင်ကျေးဇူးရှင်အဖြစ် ရိုကျိုး လေးစား ခင်မင်နေတော့သည်။ ထိုသင်္ဘော၌ ရှိစုမဲ့စု အကုန်ဆုံးရှုံး သဖြင့် လျော်ကြေးလည်း ထိုက်သင့်သလောက်ရသလို။
စာချုပ်မပြည့်၍ ယခုတဖန် နောက်သင်္ဘော တစီးပေါ် ဦးစားပေး အတူတူတွဲတင်ပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထွန်းမင်းက အညာသား။ ရန်ကုန်မှာ ဆွေမရှိမျိုးမရှိ။ သင်္ဘောပြန်နားချိန် သူငယ်ချင်းများနှင့် စုပေါင်း ငှားထားသည့် တိုက်ခန်းမှာနေသည်။ ငွေယားလေးလျှံသည့် လူပျို လူလွှတ်ပီပီ ကဲချင်တိုင်း ကဲနေသူ။ ကိုဆွေတင်ကတော့ အိမ်ထောင်သက် နှစ် နှစ်ကျော်ပြီ။ ဆောက်ဖုတ်ပြတ်လပ်ကာ သုတ်ကြောင်နေသူတွေပီပီ သောက်ကြစားကြရင်း နှာအကြောင်းများသာ ပြောဖြစ်ကြသည်။ ကိုဆွေတင်သည် မိန်းမရပြီး လိင်ဆက်ဆံရသည့်အရသာ ကြိုက်လွန်းလှ၍ တဖွဖွ သူလိင်ဆက်ဆံပုံများကို ပြောလေ့ရှိသည်။ ကိုယ့်မိန်းမနှင့်ကိုယ် လိင်ဆက်ဆံတာ ကြေးစားများနှင့် ဆက်ဆံတာထက် အဆများစွာ သာလွန်ကောင်းမွန်ကြောင်းခပ်ကြွားကြွား ပြောပြလေ့ရှိသည်။ အမှန်တကယ်လည်း ဝါဝါနှင့် လိုးရဆော်ရသည်ကို ကိုဆွေတင် ကျေနပ်အားရမှု ရှိလှသည်။ ဝမ်းရေးအတွက် သင်္ဘောထွက်ချိန်မှာပင် ဝါဝါဆောက်ဖုတ်ကို တသသ ဖြစ်နေရသည်။
နှစ်ဦးသား ပင်လယ်ထဲ ညစဉ် သောက်နေကျ၊ တညမှာတော့ ဒီကိစ္စကို ထွန်းမင်းနှင့် ဆွေးနွေးဖြစ်ကြသည်။ အရက်ရှိန်နှင့် ရီဝေဝေ၊ အာလေးလျှာလေး ကိုယ်ထင်တာ ကိုယ်စွတ်ပြောကြသည်။ “တကယ်အပေးအယူမျှမျှ လိုးတာနဲ့၊ ကြေးစား၊ကြိုက်ကုန်း၊ လစ်ဗင်းတူဂဲသား၊ ခေါ်ချင်သလိုသာ ခေါ်ပါလေ၊ အရသာချင်းကျ တအားကွာသွားပြီ . . .” “ကျွန်တော်လည်း မိန်းမအစုံတော့ လုပ်ဖူးပါတယ် . . ပြီးတဲ့အချိန်တော့ ဘယ်သူနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အတူတူလိုပါပဲ . . အပြောင်းအလဲ လုပ်ရတာ ပိုတောင် ကောင်းသလိုပဲ . . .” “ပြီးတဲ့ တဒင်္ဂမှာတော့ အားလုံး တူကောင်း တူနိူင်ပါတယ် . . . ဒါပေမယ့် လိုးနေတဲ့ တချိန်လုံးမှာ တယောက်အကြိုက် တယောက်သိပြီး မိန်းမကပါ စိတ်ပါလက်ပါ ကာမပန်းတိုင် ပြိုင်တူ လှော်ခတ်ကြတာမျိုး၊ ထွန်ထွန့်လူးနေတာမျိုး၊ သူပါပြီးသွားတဲ့အချိန် တွန့်လိမ်ပြီး အားရပါးရ အော်တာမျိုး ၊ ပြိုင်တူပြီးရတဲ့ အရသာမျိုးကျ မင်း ဘယ်သိမလဲကွာ . . .” ဒီစကားမှာတော့ ထွန်းမင်း အောင့်သက်သက် ဖြစ်သွားသည်။
အကိုပြောတာ မှန်မမှန်တော့ ကျွန်တော်လည်း မိန်းမ ရမှ သိမှာပဲ . . . ကျွန်တော်ချဖူးတဲ့ ဆော်တွေလည်း ကောင်းကြတယ်လို့တော့ ထင်တာပဲ . . . “မတူနိူင်ဘူးလို့ ကိုယ်တော့ ထင်တယ် . . . မိန်းမတွေ ပြီးတာ ဘလိုလဲ မင်းသိလို့လား . . ” “ယောက်ျားတွေလိုပဲ တကိုယ်လုံး တွန့်လိမ်ပြီး အဖုတ်ထဲက ညှစ်တယ်၊ အော်တယ်။ ဒါပဲလေ . . ဘာထူးလို့လဲ အကိုရ . . ကိုယ်ကောင်းဖို့ အဓိကပဲ မဟုတ်ဘူးလား . . . ကျွန်တော်ဆို ပထမ တချီ သွက်သွက် တီးလိုက်တယ် . . . နောက်တချီဆိုလို့ကတော့ ကောင်မတွေ အသေအော်အောင် ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ ဆွဲတာပဲ . . . တခါတလေဆို ကောင်မတွေ တောင်းပန်ယူရတယ် . . . အသေဆော်လို့ . . .” သူ လိုးနိူင် ဆော်နိူင်ကြောင်း ခပ်ကြွားကြွား ပြောလိုက်သည်။ “အဲ့ဒါမျိုး ကြေးစားကို ဆက်ဆံပုံ နဲ့ လင်မယား ဆက်ဆံပုံနဲ့က တခြားစီပဲ ဟ . . . တကယ့်တကယ် မိန်းမ ဖီးလ်တက်တာမျိုး၊ ပြီးတာမျိုး မင်း မသိသေးပါဘူး . . . ဒီဆောက်ဖုတ် လက်တဝါးစာက ယောက်ျားတယောက်ကို ကောင်းကောင်း မှိန်းမူးစေတာတော့ အမှန်ပဲ ငါ့ကောင်ရေ့။
ဒါကြောင့် မယားပြော တစ်ည ဆိုတဲ့ စကား ရှေးလူကြီးတွေ ထားခဲ့တာကိုး . . . ” “အကိုကတော့ လုပ်ပြီ . . . ” ” . . . ” “အရင်ကတော့ ကျွန်တော်လည်း အတော်ကဲ ခဲ့ပါတယ် . . . မိန်းမတိုင်း အဖုတ်ပါတာပဲ၊ တဖုတ်သတော့ မလုပ်ဘူး လို့လည်း ခံယူထားတာ . . . မိန်းမတွေ ချုပ်ကိုင်ချယ်လှယ်တာ မခံဘူးလို့ ကြွေးကြော်ထားတာ . . . ပြီးခဲ့တဲ့ သင်္ဘော မီးလောင်ပြီးတော့ ကျွန်တော် အတော် ဖျားသွားတယ် အကို . . . ကွေးသောလက် မဆန့်မီလေး အတည်တကျနဲ့ ဘဝတခုတော့ ထူထောင်ချင်လာတယ် . . “။ “ဒါပေါ့ . . ” “ခုလို အကိုက မိန်းမယူရတာ ကောင်းကြောင်းတွေချည်း ပြောတော့ ကျွန်တော်လည်း မိန်းမလိုချင်ပြီ အကိုရာ . . . ခက်တာက ယူစရာ မိန်းမ မရှိသေးတာပဲ . . ဟား . . ဟား . . .” ကိုဆွေတင် တယောက် ရီဝေဝေနှင့် “မိန်းမယူဖို့ ငါတော့ အားပေးတယ် . . . မင်း ကြည့်ချင်ရင် ငါ့မိန်းမနဲ့ ငါနဲ့ ကောင်းကောင်းလိုးထားတာတွေပြမယ် . . . ငါက ဗွီဒီယို ရိုက်ယူလာတာ . . . ” “ဗျာ . . .”။
ဒီမှာ . . ထွန်းမင်း . . မင်းနဲ့ ငါနဲ့က ဘယ်လောက်ခင်ကြတယ်ဆိုတာ ပြောနေဖို့မလိုပါဘူး . . . ဝါဝါ နဲ့လည်း မောင်နှမတွေလိုတောင် ဖြစ်နေပြီပဲ . . . ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြလို့ရပါတယ် . . . ဝါဝါနဲ့ ဆုံချိန်ကျရင်သာ မင်း မသိယောင်ဆောင်နေ . . . ” နှစ်ဦးသား အရက်တန်ခိုးလေးနှင့် သတ္တိကောင်းနေကြလေပြီ။ တယောက်ကလည်း ပြလိုပြီ။ ကျန်တယောက်ကလည်း ကြည့်လိုပြီ။ “ပြရင်တော့ ကြည့်တာပေါ့ အကို . . စိတ်ချပါ. . . အကို့ မိန်းမကို ကျွန်တော် မပစ်မှားပါဘူး . . . အကိုက ကျွန်တော့်ကျေးဇူးရှင်ပါ။ ဗဟုသုတ အဖြစ် ကြည့်ရတာပေါ့ . . .” ကိုဆွေတင်က ထွန်းမင်းနဘေးပြောင်းထိုင်၍ လက်ပ်တော့ပ်ဖွင့်ကာ ဟိုဒီရှာပြီး မူဗီကလစ် တခုကို ဖွင့်လိုက်သည်။ အိပ်ယာပေါ်မှ ကိုယ်လုံးတီး မိန်းမတယောက်ပုံ တန်းပြီးပေါ်လာသည်။ ကင်မရာကို ချိန်နေသည်မို့ မြင်ကွင်းက လှုပ်တုတ်တုတ်ဖြစ်ပြီးမှ ငြိမ်သွားသည်။ ခါတိုင်း အနောက်တိုင်း၊ အရှေ့တိုင်းနှာကားများမှ မင်းသမီးများမြင်ရသလို မဟုတ်ပဲ။
ကိုဆွေတင်မိန်းမ ဝါဝါလှိုင်ဆိုသည့်အသိကြောင့် စိတ်ထဲ တမျိုးကြီး ခံစားရသည်။ မီးလောင်စွန့်ခွာခဲ့သည့် သင်္ဘောမှဆင်းပြီးနောက်ပိုင်း ကိုဆွေတင်အိမ် မကြာခန အလည်အပတ်ရောက် အတူတူ သောက်စားလေ့ရှိကြသဖြင့် ဝါဝါလှိုင်နှင့် ထွန်းမင်းလည်း ခင်မင်နေကြပြီး ဖြစ်သည်။ ဝါဝါလှိုင်၏ အိမ်နေရင်းအဝတ်အစားများနှင့် ကောက်ကြောင်းများကို မြင်ဖူးထားကတည်းက ကိုယ်လုံးလှမှန်းသိထားပေမယ့် ယခုလို ကိုယ်လုံးတီးအလှကို တွေ့ရသည်တွင် စွဲမက်ဖွယ် ကိုယ်လုံးအလှ ပိုင်ရှင်မှန်း သိရလေပြီ။ မြင်ကွင်းထဲ ကိုဆွေတင် လီး မပျော့မမာ အနေအထားနှင့် ပေါ်လာသည်။ ဝါဝါလှိုင်ကား တရုတ်သွေး အနည်းငယ် ပါသူပီပီ အသားအရည်ကျော့ရှင်း၍ ကိုယ်လုံးအချိုးအစားကျကျ လှပသည်။ ကောက်ကြောင်းများကလည်း သူ့နေရာနှင့်သူ အပိုအလိုမရှိ။ ဆံတိုဂုတ်ဝဲလေးနှင့်မို့ ငယ်ဂုဏ်လေးလည်း ရှိသည်။ ကိုဆွေတင်က သူ့မိန်းမ ခြေထောက်တွေကို မကာ ကုတင်စောင်း ကင်မရာချိန်ထားရာဘက်သို့ ဆွဲလိုက်သည်။
ပေါင်နှစ်လုံးကြားက ဆောက်ဖုတ် ဖောင်းမို့မို့က အမွှေးပြောင်ရှင်း လှပစွာ ပေါ်လာသည်။ ထွန်းမင်း လီး ဆတ်ကနဲ တောင်လာသည်။ လုံးဝ မျှော်လင့်မထားမိသည့် အခွင့်အရေးကြီး ရနေပါလားဟု ကံကြမ္မာကို ကျေးဇူးတင်မိလေသည်။ ကာမပိုင်လင်ကြီးကို ဘေးမှာထားလျက် လီးတောင်ရသည်မှာ အားနာစရာ ကောင်းလှသည်။ “ဟို . . အမ ဟိုဥစ္စာက လှလိုက်တာ . . . အမွှေးတွေ မရှိဘူးနော် . . .” ဒီလို ချီးမွှမ်းသံကြောင့် ကိုဆွေတင် ကျေနပ်အားရမိသည်။ “အေး . . ဟုတ်တယ် . . ငါက အမွှေးပြောင်ရှင်းနေမှ ကြိုက်လို့ သူ့ကို မှန်မှန် အမွှေးရိတ်ခိုင်းတယ် . ဘာဂျာမှုတ်ရင် အဲ့လို ကတုံးမှ ငါကလည်း ကြိုက်တာ . . အစပိုင်းတော့ စူးတယ်၊ ယားတယ် နဲ့ အင်တင်တင်ပဲ . . . နောက်တော့ သူကိုယ်တိုင် အမွှေးရှည်ရင်တောင် မနေတတ်တော့ဘူး ပြောတယ် . . .” အနောက်က နှာကားများမှ အပ မိန်းမတိုင်း အမွှေးထူများသာ မြင်ဖူးနေသူ ထွန်းမင်း အဖို့ အံ့ဩတကြီး ဖြစ်မိသည်။
ဆောက်ဖုတ်ကို ကင်မရာဘက် တစောင်းမကျတကျ အနေအထားနှင့် မြင်ကွင်းကောင်းအောင်ချိန်ပြီး ကိုဆွေတင် ကြမ်းပေါ် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ကာ မြင်ကွင်းပိတ်မသွားအောင် ဂရုပြု၍ ဆောက်ဖုတ်ပေါ် ဘေးတစောင်း မကျတကျ မျက်နှာအပ်လိုက်သည်။ ပေါင်ကိုအနည်းငယ်ကား၍ ခုံးထနေသော ဆောက်ဖုတ်ဘေးခြမ်းကို စ၍ ယက်လေသည်။ ကင်မရာကို တချက်လှမ်းကြည့်လိုက်သည့် ဝါဝါလှိုင်မျက်နှာလေးမှာလည်း ဆောက်ဖုတ်အတွင်းသားလေးများလိုပင် နီရဲနေသည်။ ကိုဆွေတင်ကတော့ ပေါင်ခြံနှင့် ဆောက်ဖုတ် ဘေးသားများယက်နေရာမှ အကွဲကြောင်းတလျှောက် ထက်အောက် စုန်ဆန် စအိုဝမှသည် ဆောက်စေ့အထိ လျှာအပြားလိုက် ယက်လေသည်။ စိမ့်ထွက်လာသည့် ဆောက်ရည်များကိုလည်း မျိုချ၍ ထိုဆောက်ရည်များ၊ တံတွေးများနှင့် ဆောက်ဖုတ် တအုံလုံးမှာ စိုရွှဲ လင်းလက်နေသည်။ ဆောက်စေ့ကို ငုံ၍ စုပ်သည်။ လျှာနှင့် ဘေးတိုက် တဖျတ်ဖျတ် ခတ်ပေးသည်။
လက်ကိုလည်း အအားမထားပဲ နိူ့များကို တလှည့်စီ လှမ်းလှမ်းနယ်ပေးသေးသည်။ “အင့် အဟင်း ဟင်း . . ” ထွန်းမင်းတယောက် မြင်ကွင်းထဲ နစ်မျောကာ ကိုဆွေတင်ကို မေ့၍ လီးမှာ တအားတောင်နေပြီ။ ကိုဆွေတင်က မသိမသာ လှမ်းကြည့်ရင်း အမျိုးအမည်မသိ သာယာသလိုလို ခံစားရသည်ကို ထူးဆန်းစွာ အံ့ဩနေမိသည်။ သူတို့လင်မယား လိင်ဆက်ဆံတာ တခြား ယောက်ျားတယောက်က ကြည့်ပြီးလီးတောင်နေသည်ကို သဝန်မတိုမိသလို သူ့မယား အလှအတွက်ပင် ကျေနပ်ဂုဏ်ယူနေမိသည်။ သူကိုယ်တိုင်လည်း လီးတောင်နေပြီ။ “အ အင့် အဟင့် အင့် ရှီး အား . . ” ဝါဝါလှိုင်တယောက် ကိုဆွေတင် လျှာအစွမ်းနှင့် ပြုစုယုယမှုအောက်မှာ တွန့်လိမ် ယိမ်းထိုးနေသည်။ တချက်တချက် ကော့ကော့ ပင့်ပေးသည်။ ပေါင်တံကြီးများကို စုလိုက် ကားလိုက် လုပ်သည်။ ကိုဆွေတင် ခေါင်းကို ကိုင်ကာ ဆွဲဆွဲကပ်ပေးသည်။ “အင့် အဟင့် . . . ရပြီ . . ထည့်ချင်ပြီ မောင်ရယ် . . ” တိုးတိုး ညည်းညူ လိုက်သည်။
ထွန်းမင်းလည်း ရင်ဖိုသလိုလိုဖြစ်သွားသည်။ အာခေါင်များခြောက်လာသည်။ လက်ဖျားခြေဖျားများပင် ချွေးစေးများ စိုလာသည်။ ကိုဆွေတင်က ကောင်းကောင်းဂျာနေရာမှ ဆောက်ရည်များကို အားပါးတရ သိမ်းကျုံးယက်၍ မြိုချလိုက်ကာ မရပ်ချင်ရပ်ချင်နှင့် ရပ်လိုက်သည်။ မတ်တပ်ရပ်လိုက်ကာ ဝါဝါခြေနှစ်ချောင်းကို စုကိုင်၍ ထောင်ထားကာ ဆောက်ဖုတ်ကို ကင်မရာဘက် အကောင်းဆုံး မြင်ကွင်း ဖြစ်အောင် ပြလိုက်သည်။ ပေါင်နှစ်လုံးကြားမှ ပြူထွက်နေသည့် ဆောက်ဖုတ်ကား ဝက်ဆီဖတ်ကြီးနှစ်မျောင်းလို အိတုံဖောင်းမို့နေသည်။ တံတွေးများ၊ ဆောက်ရည်များနှင့် စိုရွှဲ ဝင်းပြောင်နေသည်။ ဝါဝါ၏ ကာမခိုးတွေ ဝေနေသော မျက်ဝန်းလှလှ လေးများကလည်း ကင်မရာကို ကြည့်လျက်။ ကိုဆွေတင်က ကျန်လက်တဖက်နှင့် ဆောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းထဲ ပွတ်ဆွဲ၍ ဆောက်ရည်များနှိုက်ထုတ်ကာ ပြောင်ဝင်းနေသည့် ဆောက်ဖုတ်ပေါ် ပွတ်သပ် ဆုတ်နယ် လိမ်းကျံပေးသည်။
ခုံးထနေသည့် ဆောက်ဖုတ်ပေါ်က ကိုဆွေတင် လက်ဖဝါးက ဂျုံနယ်နေသည့် မုန့်ဖုတ်သမားပမာ။ ကိုဆွေတင် ကုတင်ပေါ် ဒူးထောက်တက်ကာ မပျော့မမာ လီးတရမ်းရမ်းနှင့် ဝါဝါလှိုင့် ခေါင်းရင်းဘက်သို့ တရွေ့ရွေ့ တိုးသွားသည်။ ပင့်မြောက် ထားသည့် ခြေနှစ်ချောင်းမှ သူ့ဘက်က ခြေထောက်တချောင်းကို အောက်ချပေးလိုက်ပြီး ကျန်တချောင်းကို ဆက်မ ထားပြီး ပြဲအာနေသည် ဆောက်ဖုတ် မြင်ကွင်းကို ကင်မရာမှာပေါ်အောင် ထိန်းထားသည်။ ဝါဝါလှိုင်က အလိုက်သင့် တစ်တောင်နှင့်ထောက်ကာ ကိုယ်ကို စောင်း၍ ပါးစပ်ဟ ဆီးကြိုလိုက်သည်။ အနီးရောက်လာသည့် ကိုဆွေတင့် လီးကြီးကို ဒစ်မြုတ်အောင် ဖမ်းငုံလိုက်သည်။ လျှာနှင့်ဒစ်တဝိုက်ကို ရစ်ပတ်မွှေ့ယက်ပေးသည်။ တခါ အပြင်ပြန်ထုတ်၍ ဆီးထွက်ပေါက်လေးထဲ လျှာကို စုချွန်၍ ထိုးကလိသည်။
လီးကို အပေါ်ပင့်၍ အောက်မှ မေးသိုင်းကြိုးကို ယက်ပေးသည်။ ဒစ်တဝိုက်ကို လျှာနှင့် ချိတ်ဆွဲ၍ ယက်သည်။ ကိုဆွေတင့်လီးကြီးကား မာတင်း၍ ကော့ထောင်နေပြီ။ အာရှ စံချိန်လွန် လီးကြီးပင်။ အရှည် ၇ လက်မ ခန့်ရှိ၍ လုံးပတ်မှာ လက်တဆုတ်ပင် မဆန့်ပေ။ ဂုဏ်ယူလောက်စရာ အသိသာဆုံးမှာကား လုံးလုံးချွန်ချွန် ဒစ်ကြီးက မှိုပွင့်ကြီးလို ကားထွက်နေကာ ပင်မ လုံးပတ်ထက် ပိုတုတ်နေခြင်းပင်။ ထွန်းမင်းတယောက် ကိုဆွေတင်မိန်းမ၏ ဖြဲထားသည့် ပေါင်နှစ်ချောင်းကြားမှ ဆောက်ဖုတ်ပြူးပြူးလေးအား အထင်းသား မြင်နေရသည့်အပြင်၊ ကိုဆွေတင်၏ လီးကြီးအား မြတ်မြတ်နိူးနိူး၊ တယုတယနှင့် ကျင်လည်စွာ ပြုစုနေသည်ကို ကြည့်ရင်း အောက်မှ လီးကြီးမှာ ညဝတ် ဘောင်းဘီထဲမှ ထိုးထိုးထောင်ထောင် ဖြစ်ကာ ဘယ်လိုမှ ဖုံးဖိမရတော့အနေရခက်နေလေတော့သည် ….ပြီးပါပြီ။
မြင့် ရဲ့ ရည်း စား အ တွေ့ အ ကြုံ